Nyochaa nke SmartMike + site na Sabinetek, obere igwe okwu ikuku | Akụkọ akụrụngwa
Taa ka anyi ji bia a-akpali nnọọ mmasị nyochaa, karịsịa maka ndị, n'etiti ihe omume ntụrụndụ ha, ma ọ bụ ndị na-emepụta ọdịnaya ọdịyo. Site na enyemaka nke SabineTek anyị enweela ike ịnwale Igwe okwu SmartMike + Bluetooth.
Ngwa nke ga-enye a mma ego gị videos ekele na àgwà nke ọdịyo ndekọ ọ na-enye. Obere igwe okwu ga-eme ka ngwa ndekọ gị dị mfe karịa. Ọ ga-emekwa na-emekwa ka ọ ka mma na ọkwa ọkwa ọkachamara.
1 SabineTek SmartMike +, mic ị na-achọ
2 SmartMike + ọdịnaya ọdịnaya
3 Nhazi na ọdịdị anụ ahụ nke SmartMike +
4 Teknụzụ niile nke SmartMike + na-enye anyị
5 Nkọwapụta SmartMike +
6 Uru na ọghọm nke Sabinetek SmartMike
SabineTek SmartMike +, mic ị na-achọ
Ọ bụrụ n’egwu na-atọ gị ụtọ, ọ na-amasịkwa gị idekọ onwe gị. Ọ bụrụ na isonye na pọdkastị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọkwa ọkachamara ị kwesịrị ịdekọ onwe gị na ọdịyo ma ọ bụ vidiyo. SabineTek SmartMike + bụ ngwa kachasị mma. Igwe okwu ikuku na-ejighi eriri na ogo ọdịyo onye ọ bụla chọrọ maka vlog gị ma ọ bụ maka njikọ gị. Lee ị nwere na Amazon na SmartMike + na mbupu n'efu
Chefuo nnukwu okwute ndị ahụ Na eriri na-adịghị mma n'ime uwe. Na a mfe mwekota na a ngwaahịa belata ka kacha na size ị ga-enwe ruru ugboro isii dị elu karịa site na iji igwe okwu ọnụ. Njikọ 5.0 Bluetooth maka nkwụsi ike e kwere nkwa na imewe ugbu a nke anyị ga-agwa gị ihe niile dị n'okpuru.
Ngwa dị oké mkpa maka vlogger ọ bụla eruola. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ndị kasị mma ọkachamara ụda gị videos ma ọ bụ dekọọ pọdkastị gị na nke kacha mma, kwụsị ile anya. SmartMike + bụ igwe okwu kwesịrị ekwesị. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike were ya ma dekọọ ya ebe ọ bụla. Ike gị mbelata mkpọtụ anam ịdekọ na mpụga abụghịzi nsogbu.
SmartMike + ọdịnaya ọdịnaya
Nke a abughi nsogbu ọ bụla, anyị nwere oge ole na ole iji nwalee ngwa dị ka igwe okwu ikuku a. Oge erugo ile anya n'ime SabineTek bụ naanị microphone igbe iji gwa gị ihe niile ọ na-enye anyị.
E wezụga igwe okwu, nke anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu n'okpuru, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe. N'adịghị ka ihe na-eme na ekweisi, enwere ọtụtụ Ngwa ndị dị mkpa iji mee SmartMike + ọbụna zuru ezu.
Anyị nwere chaja nja, na usoro Micro USB na USB. Anyị chọpụtakwara isi okwu mono, otu nti na anyị nwere ike jikọọ na ntinye 3.5 mm nke SmartMike + nwere. Na obere ákwà na-ebu akpa nke mere na a na-echekwa igwe okwu n’ụzọ zuru oke.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye na obere ojiji na ntuziaka nhazi, nke naanị na-abịa na Bekee na Chinese zuru oke, anyị nwere mgbakwunye ndị ọzọ. Ọ bụ ihe Abụọ 'hoods' maka mpaghara igwe okwu, otu n'ime ụfụfụ na onye ozo nke ntutu sịntetik toro ogologo. Ha abụọ na-eje ozi iji zere mkpọtụ sitere na onye na-ekwu okwu ma ọ bụ mkpọtụ mpụga dị ka ifufe, nke zuru okè cushioned.
Nhazi na ọdịdị anụ ahụ nke SmartMike +
Na mgbakwunye na ịnye atụmatụ niile anyị nwere ike ịchọ na ngwa nke ụdị a, SmartMike + nwekwara ihe mara mma ma mara mma. Nwee ọla dara agba abụọ zuru oke jikọtara. Anyị na-ahụ nsụgharị abụọ, oji ma obu ocha, nke kachasị ogologo, yana agba agba na mpaghara ebe micro dị.
Na ala ya, nke bụ nke ga-agbada ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tinye ya na mwekota, anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri. Na nke a ọ bụ ntinye Micro USB nke eriri ya di n'ime igbe maka ichaji.
Na n'ihu akụkụ, nke a na-ahu anya mgbe anyi ji ya, anyi nwere a obere Ikanam ìhè nke ga-agbanwe agba dabere na ị na-edekọ ma ọ bụ kwụsịtụ. N'akụkụ nke dị n'elu ka anyị hụrụ, n’otu njedebe igwe okwu n’onwe ya. Micro na anyị nwere ike ichebe ya na obere mpe mpe akwa anyị hụrụ n'ime igbe. N'akụkụ gị, anyị nwere, ebe dị mma, Igodo ike. Na usoro elongated na agba uhie nke na-enye ihe ederede nke agba.
Na elu anyị nwere Ntinye jaak 3,5mm mini Jack ebe inwere ike ijikọ igwe analog. Ihe ga - abata inwe ntinye okwu n’otu oge anyị na - ekwu okwu. Ya mere, anyị nwere ike ijigide mkparịta ụka na njikọ dị ndụ, ma ọ bụ na ndekọ nke anyị na-emekọrịta site na oku ekwentị, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwa ị na-achọ zụta ugbu a site na ịpị SmartMike ebe a
Teknụzụ niile nke SmartMike + na-enye anyị
Dị ka anyị na-agwa gị, ọ bụghị naanị na anyị na-emeso otu igwe okwu kachasị mma na ahịa. Na mgbakwunye na usoro kọmpụta buru ibu na imewe ọmarịcha mma, na SmartMike + bịarutere kwadebere na teknụzụ kachasị mma nke oge a iji nye kasịnụ kachasị mma maka ndekọ gị ma ọ bụ mgbasa ozi gị.
Otu ihe dị mkpa nke ụdị ngwa ndekọ egwu dị otu a bụ obodo kwụụrụ ya nwere ike inye anyị. SmartMike + nwere batrị 110 mAh, nke a priori dị obere. Mana ekele maka ezigbo ike ịrụ ọrụ ọ bụ ike nke inye anyị ihe ruru awa ise nke ịrụ ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị.
Ọ nwere n'ime na mgbapụta arụpụtara naanị onye mmepe ya nwetacha njikarịcha kachasị nke akụrụngwa niile n'oge ọrụ ya, ndị Qualcomm CSR8670. Na-enye ohere a ezigbo ndekọ na mma ụda ekele mwepu mkpọtụ. N'ihi Teknụzụ TWS, ndị SmartMike + enwere ike ijikọ ya na onye ọzọ hà nhata ma jiri ya n'otu oge mgbe enwere ọtụtụ ndị na-emegharị ọnụ.
Anyị nwere ike iji igwe okwu Sabinetek dekọọ onwe anyị mgbe anyị na-akparịta ụka ekwentị. Anyị nwekwara ike ịnwe ọdịyo maka ekweisi anyị hụrụ n'ime igbe ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, na-enyefe ọdịyo nke ọtụtụ ala dị larịị nke dị nso na 49.2 ft.. Ọ nwere ike ịmata ọdịyo na awade ekwe omume nke akpaka ọgbọ nke editable sobtaitel faịlụ.
Nkọwapụta SmartMike +
Nlereanya SmartMike +
mgbawa Qualcomm CSR8670
Ikuku ikuku 2
Pkpụrụ nlele 44.1 Khz
Batrị 110 mAh
Onwe ya Ruo awa 5
Analog interface 3.5 mm
Ibu ibu 14 g
Akụkụ X x 5.8 1 1.5 cm
Ahịa 132.99 €
Linkzụta njikọ SmartMike +
Uru na ọghọm nke Sabinetek SmartMike
Size belatara yiri Pen Drive
Mmekọrịta na ihe niile dị formats
Ọkachamara ọkachamara na ndekọ olu maka ọdịyo na vidiyo
Nnwere onwe nke ruo awa 5 nke iji gara n'ihu.
Batrị pere mpe na ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na na obodo kwụụrụ ha na-echebe onwe ha nke ọma.
Ihe nkwekọ dị obere maka uwe ma ọ bụ akwa akwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa nke SmartMike + site na Sabinetek
Etu esi anwale Google Stadia Pro n'efu maka ọnwa 2